अनुहारमा स-साना प्वालहरु देखिए ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्, - HelloKhabar
अनुहारमा स-साना प्वालहरु देखिए ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्,
२०७७ मंसिर २२, सोमबार १३:३५
हरेक व्यक्तिको अनुहारमा प्वालहरु ( रोम छिद्र ) हुन्छन् । ती प्वालको मद्दतले छालाले सास फेर्छ । साथै, ती प्वालहरुबाट चिल्लो पदार्थ निस्किन्छ, जसले हाम्रो छालालाई चिल्लो बनाइराख्छ । अनुहारको छालामा साना साना प्वाल हुनु स्वाभाविक हो। तर धेरै जसो व्यक्तिको छालामा ती प्वालको आकार बढ्दै जान्छ । त्यसले अनुहारलाई फोहोर र नराम्रो देखाउंछ । ती प्वालहरुलाई कम गर्नको लागि बजारका प्रसोधित सामग्री भन्दा घरेलु उपचार प्रभावकारी र दीर्घकालीन हुन्छ । अनुहारका ठूला रोम छिद्रलाई कम गर्नको लागि घरमै फेसप्याक तयार गर्न सकिन्छ । यसको लागि केराको बोक्रा, दही, टमाटरको रस, निमको पात, मुलतानी माटो, कागती आवश्यक हुन्छ।
मुख्य समाचार हेलाेखबर - २०७७ मंसिर २२, सोमबार १३:३५
आर्थिक २०७७ मंसिर २२, सोमबार १३:३५
मुख्य समाचार २०७७ मंसिर २२, सोमबार १३:३५
ब्यानर २०७७ मंसिर २२, सोमबार १३:३५